काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक २५.८२ अंकले उकालो लागेको छ । यस दिन १ प्रतिशतले बढेर २ हजार ६११.१० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको हो । बिहीबार नेप्से इन्डेक्स पनि ३.९१ अंकले बढेको छ । यस दिन ०.८४ प्रतिशतले बढेर ४ सय ६९.०२ विन्दुमा पुगेर इन्डेक्स बन्द भएको छ । आजको शेयर कारोबार रू. …
काठमाडौं । यो साता दुई कारोबार दिन लगातार उच्च अंकले घटेको बजार तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक ३.६९ प्रतिशत बढेको छ । यसदिन नेप्से परिसूचक ९२.४६ अंक बढेर २ हजार ५९९.०७ विन्दुमा पुगेको हो । आज २ हजार ५०६.५२ विन्दुदेखि खुलेको बजारमा सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ३.२० प्रतिशतले बढेको छ । सेन्सेटिभ इन्डे…
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ७५.७९ अंकले घटेर २ हजार ५७२.२२ विन्दुमा बन्द भएको छ। यस दिन शेयर बजार २.८६ प्रतिशतले घटेर २ हजार ६०० विन्दु तल झरेको हो । आज २ हजार ६६३.८४ विन्दुदेखि खुलेको बजार २ हजार ५६४.७८ विन्दुसम्म झरेको छ । यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २.६३ प्रतिशत…
काठमाडौं । बुधबार नेप्से परिसूचक ३२.४१ अंकले घटेर २ हजार ६३२.२० विन्दुमा झरेको छ। यस दिन १.२२ प्रतिशतले बजारमा म्युचुअल फण्ड बाहेकका सबै परिसूचक घटेको हो । यता ठूला कम्पनीको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ६.२१ अंकले घटेर ४७३.३९ विन्दुमा झरेको छ । यस दिन रू. ५ अर्ब ७७ करोड २२ लाख ५१ हजार बराबरको …
सोमबार नेप्से परिसूचक ३७.५८ अंकले ओरालो, रू. ६ अर्ब ७६ करोड माथिको कारोबार
काठमाडौं । सोमबार नेप्से परिसूचक ३७.५८ अंक घटेर बजार २ हजार ६६१.९३ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यो दिन १.३९ प्रतिशत घटेको हो । यो दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ७.०६ अंक घटेर ४७९.१० विन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा सेन्सेटिभ इन्डेक्स १.४५ प्रतिशत घटेको हो । साताको पहिलो कारोबार दिन ओरालो लागेको श…
आइतबार नेप्से परिसूचक ३५.८९ अंकले घट्यो, ८ अर्ब ८० करोडभन्दा बढीको कारोबार
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार नेप्से परिसूचक ३५.८९ अंकले घटेर २ हजार ६९९.५१ विन्दुमा झरेको छ । गत चैत १७ गतेदेखि निरन्तर बढेको बजार चैत २५ गते घटेको थियो । त्यसपछि आज १.३१ प्रतिशतले घटेको हो। आइतबार २ हजार ७५९.९० विन्दुदेखि बजार खुला भएको थियो । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पन…
रुरु हाइड्रोको आइपिओ बाँडफाँट्
काठमाडौं । रुरु जलविद्युत् परियोजनाले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको आइपिओ बाँडफाँट भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले आज बिहान रुरु जलविद्युत् परियोजनाले निष्काशन गरेको आइपिओ बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीले गत चैत २० गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको आइपिओमा १६ लाख ८३ हजार १२१ आवेदकबाट रु दुई दुई करो…
नयाँ वर्षको पहिलो कारोबार दिन नेप्से २०. ६८ अंकले बढ्यो, ८ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढीको कारोबार
काठमाडौं । विसं २०७८ सालको पहिलो कारोबार दिन बिहीबार नेप्से परिसूचक २०.६७ अंक बढेर २ हजार ७३५.४६ विन्दुमा पुगेको हो । यो दिन परिसूचक ०.७६ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । यस दिन सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि ६.१७ अंकले बढेर ४ हजार ९२.४४ विन्दुमा पुगेको छ । इन्डेक्स १.२७ प्रतिशतले बढेको छ । यो साताको तीन कारोबार द…